Chamira sanduko-- pamabasa/ Be Bold for Change- in the Work Place
Mhemberero dzezuva revanhukadzi oasi rose rakaitirwa paNational Gallery of Zimbabwe muHarare. Paiva navanhu vakawanda chose vakauya kuzonzwa nhaurwa navanachamangwiza mundima dzakasiyana-siyana dzinosanganisira zvekurima, zvemutemo nezvekufambiswa kwemabasa. Vanhukadzi navanhurume kubva kumishando yakasiyana-siyana vakaungana apa kuri vaite zvenzeve nemeso kwete kuzoita zvemuromo nekuti vaisada kuita kutautirwa hunyimwa.
Zviratidzwa zvemabasa amadzimai airatidzwa nekutengeswa pachiitiko ichi. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017
Vanhu vachishorera shavo dzevanhukadzi dzairatidzirwa pamwe nekushaviswa. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017
Vagadziri veuchi vac hiratidzira huchi hwavo nekupa zvidzidzo pamusoro pekurima uchi. Mufananidzo naTinashe Muchuri
Vamwe vaive vauya kuzoona mabasa pamwe nekuva pamutambo wemhemberero dzemadzimai idzi. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017
Hope Masike achiratidzira mimhanzi yake pachiitiko ichi. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017
Vamwe vevakaungana apa. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017
Vachiona zvaiva zvanyorwa pabhakana navamwe vaiva pamutamo uyu. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017
Sokostina aka Tendai Garwe achitungamira basa samuShamarari pazuva iri. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017
Sekai Nzenza achitura nhaurwa yake. Mufananidzo naTinashe Muchuri 2017
Bishow na Shingi Munyeza pazuva iri. Mufananidzo naTinashe Muchuri. 2017